Weligeed ma fududa in la kariyo suxuunta dhadhanka ah iyo kuwa dufan leh marka la barbar dhigo fiilada hawada - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Weligeed ma fududa in la kariyo suxuunta delicious iyo miisaanka leh marka la barbar dhigo fryer hawada - BGR
At 159,99 $, 15 1 GoWISE USA 12,7 Korontada Qalabka Fiilada Korontada GoWISE USA waa xoogaa ka qaalisan inta badan dukaamada hawada ee suuqa. Laakiin waa u qalantaa sababtoo ah waxay ka badan tahay fryer hawada ah. Waxaa la iman 10 accessories kala duwan oo laguu ogolaado in aad loo kariyo oo dhan cayn kasta oo cuntada la raaxaystay ayaa callaaliska, iyo waxa ay leedahay presets 15 si aad u raaxaysan karinta kaamil ah mar kasta. Tilmaamahan xitaa waxaa ka mid ah shaqooyinka rotisserie iyo hawlaha fuuq-baxa, iyo sidoo kale buug cunto karis ah oo ka kooban raashinka raashinka leh ee 50.
Halkan waxaa ku qoran dhibcooyinka ku qoran bogga wax soo saarka:
QOYSKA yimaa-& Space Saver: litir 12,7 of Iyada oo ay meel karinta, maraqii hawada tani waa mid ka mid ah suuqa ugu weyn, halka inta soo hartay is haysta oo ku filan in ay si fudud ku haboon in miiska aad shaqada. Heerarka 3 ayaa kuu oggolaanaya inaad diyaariso tirooyinka qoysaska, ama xakamee xawaaraha iyo casriyeynta cunto karintaada.
ROTISSERIE INTEGRIED: U diyaari roasts, laysu geeyo, boodhadhka dheeriga ah iyo xataa digaaga oo dhan! Hel hilib tegayo, kalluunka si fiican u madowyahay, iyo khudaarta dubay si fiican u la ridayo dhafan rotisserie GoWISE Air maraqii - waa si degdeg ah, fudud oo aad u jeclaan doonaa!
Waxaa ku jira 10 Accessories: Waxay la socotaa 10 Accessories - Dhamaan waxaad u baahan doontaa inaad sameyso cunto guri guri sahlan. accessories waxaa ka mid ah solay ah silig, galidda ul digsiga, hayayaashii ah foornada, saxaarad faleebo a, a skewers rotisserie, sol qafas, sol qafis steak ah, dambiisha mesh a-gacmeed iyo laba birood mesh. Maaraynta kontoroolka leh ee 15 presets ayaa fududaynaya waqtiyada karinta iyo heerkulka. Ku kari si sahlan ama qancin adigoon weligaa iftiin karayn kariyaha. Markaad dhammaysato, birta qaloocsan ee aan saldhigga lahayn iyo saxarada aan duubnayn ee aan duubnayn waxay nadiifinaysaa nadiifinta.
50 XUSUUSYADA BILAASHA: Qalabkaaga waxaa ka mid ah buug cunto karis ah oo si khaas ah loogu talagalay GoWISE. Maraykanka Foornada Foostada ee Maraykanka. Maanta bilaabi cunta raashinka 50 tallaabo tallaabo ah si aad u ogaatid wax kasta oo qalabka jikada ee cusub.
Raac @BGRDeals on Twitter si aan kuula socodsiinno soo bandhigyada ugu dambeeyay iyo kuwa ugu dambeeyay ee aan helnay aduunka oo dhan. Web.
Waxyaabaha ku jira BGR Deals waxay ka madaxbannaan Tifaftirka iyo Xayeysiinta, BGR waxay heli kartaa guddi iibsasho ah oo lagu sameeyo boosteejooyinkeena.